Jahwareerka shahaadooyinka tallaalka ayaa hortaagan soo kabashada safarka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Waajib ah » Jahwareerka shahaadooyinka tallaalka ayaa hortaagan soo kabashada safarka
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • saaciday inay • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Jahwareerka shahaadooyinka tallaalka ayaa caqabad ku noqon kara soo kabashada safarka
Maqnaanshaha diiwaannada digitalka ah ee waddamada qaarkood, oo ay ku jirto Mareykanka, ayaa ka dhigaysa caddaynta xaaladda tallaalka mid adag.
Tallaallada waxaa lagu ammaanay inay yihiin kuwo u sahli kara safarka iyo rajo yar oo warshadaha ah.
Shuruucda kala daadsan iyo heshiisyo la aanta oo wada ayaa xaddidaya safarka.
Dadka socotada ah ayaa ku wareeray sida ay u siin lahaayeen xaaladda tallaalkooda.
La'aanta nidaamka shahaadaynta tallaalka ee caalamku aqoonsan yahay ayaa caqabad ku noqon kara soo kabashada safarka maadaama safarro badan ay ku wareersan yihiin shuruudaha karantiilnimada iyo xannibaadaha safarka. Iyada oo leh xeerar kala duwan, qaar ayaa dooran kara safarada gudaha, oo dharbaaxo ku ah meelaha ku xiran booqashada caalamiga ah.
Tallaallada waxaa lagu ammaanay inay yihiin kuwo u sahli kara safarka iyo rajo yar oo warshadaha ah. Si kastaba ha ahaatee, xeerarka kala daadsan iyo heshiisyo la'aanta wadaagga ah ayaa sii xaddidaya socdaalka, iyada oo xayiraadaha socdaalku ay yihiin caqabadda labaad ee ugu weyn ee u safri karta 55% jawaab -bixiyeyaasha codbixintii ugu dambeysay ee warshadaha.
Dadka socotada ah ayaa ku wareeray sida ay u siin lahaayeen xaaladda tallaalkooda xeerar kala duwan oo ku kala baahsan meelaha loo safro. Goobaha qaarkood, socdaalayaashu waxay u baahan yihiin inay ku boodaan dhowr xabbadood si ay u caddeeyaan xaaladdooda, iyo haddii ay u safrayaan dalal badan, hannaanku inta badan wuu kala duwan yahay. In kasta oo ay u muuqato in xannibaadihii la fududeeyay, haddana kakanka caddaynta tallaalka ayaa sii ahaan doona caqabad.
Ummadaha kala duwan waxay faraan xeerar kala duwan si ay u muujiyaan caddaynta tallaalka, laga bilaabo warqad ilaa diiwaanada dhijitaalka ah. Diiwaanada dhijitaalka ah ma fududa in laga helo quruumaha qaarkood, waxayna ku dari doonaan lakab kakan oo loogu talagalay dadka socotada ah, taas oo keeni karta inay dib uga fikiraan qorshayaashooda.
Caddaynta tallaalku waxay u muuqataa inay tahay fikrad ka dambaysa soo bixitaanka tallaalka. Maqnaanshaha diiwaannada digitalka ah ee waddamada qaarkood, oo ay ku jirto Mareykanka, ayaa ka dhigaysa caddaynta xaaladda tallaalka mid adag. IATABaasaboorka socdaalka ayaa lagu ammaanay inuu yahay xalka warshadaha laakiin qaadashadiisu way liidatay, waxaana jiray is -dhexgal dawladeed oo kooban. Iyada oo adeeg bixiyayaal kale ay galayaan booska, waxay abuurtay nidaam kala jajaban oo u baahan dadka socotada ah inay soo rogaan caddaynta naftooda si ay u abuuraan baas dhijitaal ah. Dadka socotada ah waxay u jihaysan karaan meelaha loo maro xeerar ka sahlan ama waxay dooran karaan safarada gudaha taas oo keenta in meelahu seegaan booqdayaasha.
Socotadu waxay rabaan xalal fudud oo u baahan dadaal yar. Warshaduhu waa inay si wada jir ah u wada shaqeeyaan si ay u dhexgalaan xal u shaqeeya dhammaan daneeyayaasha warshadaha. Illaa markaas, qaar baa ka fogaan doona safarka sababtoo ah dabeecadda adag ee caddaynta xaaladda tallaalka.
Haddii aan dhaqso loo qaadin tallaabooyin, waxay suurtogal tahay inay cabudhiso dalabka caalamiga ah maadaama xeerarku ay aad u adkaan karaan in la fahmo oo laga yaabo in soo kabashada meelaha ay istaagto.